Amazon Integration - Amazon, Ebay, Allegro र Etsy सँग ई-निर्यात प्रोपार्स गर्दछ
यो Propars संग तपाइँको Amazon.com स्टोर व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ!
Propars मा तपाइँको उत्पादनहरु अपलोड गर्नुहोस् र अमेजन मा बेच्नुहोस्, संसारको सबैभन्दा ठूलो ई-वाणिज्य प्लेटफर्म!
Propars, अमेजन एकीकरण संग, सबै देशहरु जहाँ अमेजन सक्रिय छ, विशेष गरी अमेरिका, यूरोप र अरब प्रायद्वीप मा बिक्री शुरू!
अमेजन बाट तपाइँको आदेशहरु तपाइँको सबै अन्य आदेशहरु संग एकै स्क्रिन मा एकत्रित गरीन्छ।
तपाइँ एक एकल क्लिक संग अमेजन मा Propars मा जोड्ने उत्पादनहरु बेच्न सक्नुहुन्छ।
Amazon.com मा बेच्नु धेरै व्यवसायहरूको लागि सपना साकार भएको जस्तो देखिन्छ। जे होस्, स्टोर खोल्नु र यो विशाल बजारमा बेच्नु तपाईले सोच्नु भन्दा धेरै सजिलो छ। Propars-Amazon एकीकरण संग Amazon मा बेच्न सक्षम हुन को लागी, यो टर्की मा एक मान्य कर दर्ता पर्याप्त छ। यदि तपाइँसँग कर रेकर्ड छ भने, तपाइँलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारमा बिक्रेता बन्नको लागि प्रोपर्स मात्र चाहिन्छ!
Amazon.com सँग एकीकरण गर्ने टर्कीको पहिलो र एकमात्र कम्पनी भएको कारण, Propars Amazon SPN सूचीमा पनि छ र टर्कीमा Amazon को समाधान साझेदार हो।
तपाइँ तपाइँको अन्य भर्चुअल स्टोरहरू प्रोपार्स प्यानलमा एकीकृत गरेर एउटै ठाउँबाट तपाइँका सबै स्टोरहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाइँ Amazon.com मा बेच्नुहुनेछ।
Amazon.com संसारको सबैभन्दा ठूलो बजार
Amazon 300 मिलियन भन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू र एक अरब डलर भन्दा बढीको दैनिक कारोबार भएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो ई-कमर्स साइट हो। यस इकोसिस्टममा बिक्रेता हुनु भनेको आफ्नो उत्पादनहरू सम्पूर्ण विश्वमा पुर्‍याउनु हो। ई-निर्यात गर्न चाहने व्यवसायको लागि सजिलो र सुरक्षित पोर्ट।
थप रूपमा, Amazon को ब्रान्ड जागरूकता र विश्वसनीयताले तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खर्चहरूबाट जोगाउँछ जसको अनिश्चित अन्त्य हुन्छ।
Amazon.com मा USD मा व्यापार गरिने तपाइँका उत्पादनहरूले TL मा मूल्य प्राप्त गर्नेछ र तपाइँको नाफा बढाउनेछ। ई-निर्यातले तपाईंलाई लाखौं सम्भावित ग्राहकहरू र विदेशी विनिमय दरहरूमा कमाई प्रदान गर्दछ।
अमेजन एकीकरण स्टोर सेटअप
Amazon.com मा एक स्टोर सेट अप एक गम्भीर र मेहनती प्रक्रिया हो। यस कारणका लागि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो कागजातहरू सही र पूर्ण रूपमा तयार पार्नुहोस्। टर्कीमा तपाईंको व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातहरू Amazon मा मान्य छन्।
तपाईंले Propars टोलीबाट यस प्रक्रियासँग सम्बन्धित व्यावसायिक समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। जब सही कदमहरू लिइन्छ, स्टोर सेटअप प्रक्रिया एक चरण हो जुन छिटो र सजिलै पार गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, यदि तपाईंसँग पहिले नै अमेजन स्टोर छ भने, यसलाई तपाईंको प्रोपार्स प्यानलमा एकीकृत गर्न केही सेकेन्ड मात्र लाग्छ।
स्टोर सेटअप र एकीकरणको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न तपाईं अहिले नै प्रोपर्स विशेषज्ञसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
Propars - Amazon एकीकरण
Propars, टर्की मा Amazon को व्यापार साझेदार संग, यो Amazon मा बेच्न हरेक व्यवसाय को लागी सम्भव छ। Propars-Amazon एकीकरणमा तपाईंले फाइदा लिन सक्ने केही सुविधाहरू निम्नानुसार छन्;
- Amazon.com मा उत्पादन सूची,
- अर्डर व्यवस्थापन र नि: शुल्क ई-इनभ्वाइस,
- स्वचालित स्टक ट्र्याकिङ,
- टर्की व्यवस्थापन अवसर,
- स्वचालित भाषा र मापन अनुवाद,
- स्टोर सेटअप समर्थन,